Fanontaniana napetraka matetika - YTpals
Ireto ny valin'ny fanontanianay izay matetika napetraka. Raha tsy mahita valiny eto ianao dia andefaso mailaka izahay.
Ahoana no fomba hampiasako ilay tranonkala?
Rehefa mitsidika ny YTpals ianao dia kitiho ny rohy "Login / Register" ao amin'ny menio lohan-doha ambony.
Takiana aminao ny fidirana amin'ny kaonty Google (YouTube) anao. Vantany vao miditra ao amin'ny kaontinao ianao dia ekeo fotsiny ny fahazoan-dàlan'ny fampiharana ary hitantana ny vavahadin'ilay mpikambana ianao.
Azafady mba mariho: tsy mahazo ny mombamomba ny fidirana aminao izahay na manana fidirana amin'ny kaonty YouTube anao. Ny kaontinao dia afaka mampiasa YTpals soa aman-tsara nefa tsy misy fanahiana amin'ny YTpals na antoko hafa mahazo fidirana.
Rehefa ao amin'ny vavahadin'ilay mpikambana ianao dia atolotra anao drafitra 4 YTpals, izay misy ny Basic, Starter (malaza indrindra), orinasa ary olo-malaza. Miankina amin'ny zavatra ilainao manokana sy ny zavatra takinao, azonao atao ny manapa-kevitra ny handeha miaraka amin'ny drafitra Maimaim-poana na amin'ny sarany isam-bolana kely, mandeha miaraka amina drafitra karama toy ny drafitra Enterprise na Celebrity.
Hatraiza no azo antoka ny YTpals?
YTpals dia serivisy azo antoka sy atokisan'ny mpikambana 300,000+ mahery, miaraka amin'ny fitomboana isa-minitra! Ny tsiambaratelo sy ny fiarovana anao no tanjontsika # 1, ka izany no antony namolavola kaody matanjaka sy niambina ny tranokala tamin'ny alàlan'ny enkripsi 256-bit.
Voatahiry ao amin'ny YTpals ve ny fampahalalana momba ny fidirana amin'ny kaontiko?
TSIA! Tsy mahazo ny mombamomba ny fidirana YouTube / Google anao izahay ary ny anaran'ny fantsonao, URL fantsona ary ny adiresy mailakao ihany no itehirizanay ao anaty angon-drakitra mba hahafahan'ilay tamba-jotra mandefa mpisera aminao. Tsy misy zavatra hafa intsony!
Antsipiriany momba ny drafitra maimaimpoana (drafitra ifotony)
Rehefa tsindrio ny bokotra "Activate" dia hitodiana any amin'ny pejy iray ilainao ny hisoratra anarana amin'ny fantsona 10 hafa ary toy ny horonan-tsary 10. Aorian'ny tsindrio ny bokotra maintso "Activate" dia araho tsara ireo torolàlana an-tserasera mba hampandeha tsara ny drafitra.
Raha sendra olana ianao manandrana mitady / na misoratra amin'ny fantsona iray, kitiho ny bokotra mavo "Skip" mba hampisehoana fantsona vaovao. Rehefa nisoratra anarana tamina fantsona 10 tamim-pahombiazana ianao ary nankafizinao ny horonantsary 10, dia halefa ny drafitra Fototra ary hahazo mpamandrika 5 ianao ao anatin'ny fe-potoana fampidirana 24 ora.
Ity rafitra vaovao ity dia tena mandaitra ary hampody ireo mpamandrika 5 hiverina aminao alohan'ny marika 24 ora, alohan'ny hamerenanao ny bokotra, saingy tadidio fa misy olona sasany mety hisoratra anarana aminao ka hahatonga anao hahazo 3 Mpanjifa 5 isaky ny activation. Ireo izay misoratra anarana amin'ny mpampiasa hafa azo tamin'ny alàlan'ny YTpals dia voarara ho azy.
Ny drafitra fototra dia manana fetra lehibe 2, izany hoe avela hampiasa azy io indray mandeha isaky ny 24 ora ianao ary tsy maintsy miditra ao amin'ny YTpals isaky ny mihetsika indray ny drafitrao. Midika izany fa rehefa avy manindry ny bokotra "Activate" ianao dia tsy afaka manindry ny bokotra "Activate" mandritra ny 24 ora hafa. Rehefa tapitra ny fe-potoana 24 ora ary avela hanery ny bokotra "Akory" ianao dia hahazo fampandrenesana mailaka mandeha ho azy hampahatsiahy anao raha nisafidy ny handray an'io ianao.
Antsipiriany momba ny drafitra maimaim-poana (drafitra fanombohana)
Rehefa tsindrio ny bokotra "Activate" dia hitodiana any amin'ny pejy iray ilainao ny hisoratra anarana amin'ny fantsona 20 hafa ary toy ny horonan-tsary 20. Aorian'ny tsindrio ny bokotra maintso "Activate" dia araho tsara ireo torolàlana an-tserasera mba hampandeha tsara ny drafitra.
Raha sendra olana ianao manandrana mitady / na misoratra amin'ny fantsona iray, kitiho ny bokotra mavo "Skip" mba hampisehoana fantsona vaovao. Rehefa nisoratra anarana tamina fahitalavitra 20 tamim-pahombiazana ianao ary nankafizinao ny horonantsary 20, dia hoentina ny drafitra Starter ary hahazo mpamandrika 10 ianao ao anatin'ny fe-potoana fampidirana 12 ora.
Ity rafitra vaovao ity dia tena mandaitra ary hampody ireo mpamandrika 10 hiverina aminao alohan'ny marika 12 ora, alohan'ny hamerenanao ny bokotra, saingy tadidio fa misy olona sasany mety hisoratra anarana aminao ka hahatonga anao hahazo 7 Mpanjifa 10 isaky ny activation. Ireo izay misoratra anarana amin'ny mpampiasa hafa azo tamin'ny alàlan'ny YTpals dia voarara ho azy.
Ity drafitra fanombohana ity dia misy fahasamihafana roa lehibe amin'ny drafitra ifotony. Ny mahasamihafa azy voalohany dia ny ahafahanao mampavitrika azy io sy mahazo mpanjifa 10 isaky ny 12 ora fa tsy isaky ny 24 ora. Ny fahasamihafana faharoa dia fa tsy ny fisoratana anarana amin'ny fantsom-pifandraisana 10 hafa dia tokony hisoratra anarana amin'ny 20. Ny fisoratana anarana miverina amin'ny fantsona 20 hafa no antony voalohany avela hampiasana ity drafitra ity isaky ny 12 ora.
Miezaka ny mampihetsika drafitra iray aho, saingy tsy avelan'ny rafitra hisoratra anarana amin'ny fantsona aho.
Raha manana olana amin'ny fisoratana anarana amin'ny fantsona ianao amin'ny antony rehetra, tsindrio fotsiny ny bokotra mavo "Skip" mba hampidirana fantsona vaovao. Raha vantany vao feno ny fantsona vaovao dia azonao atao ny manandrana misoratra anarana amin'izany ary tokony handeha izy.
Raha tsy mandeha izy dia tsindrio ny rohy "Login" eo an-tampon'ny pejy mba hidiranao indray ary avy eo dia tokony ho afaka hanohy ny toerana nijanonanao ianao. Hamelombelona ny pejy izany.
Ahoana no hanafoanana ny drafi-pahafahako?
Mora ny manafoana ny drafitra maimaimpoanao. Aza miditra amin'ny YTpals fotsiny ary mampiasa ny serivisinay ary tsy handray na handefa mpamandrika vaovao intsony ianao. Aza adino fa ny fantsona nosoratanao nandritra ny fampiasana tamin'ny YTpals dia tokony hijanona ao amin'ny kaontinao mba ho ara-drariny amin'ireo mpampiasa hafa.
Antsipirian'ny drafitry ny orinasa, elita ary olo-malaza (drafitra karamaina)
Ny drafitra Enterprise, Elite ary Celebrity dia malaza amin'ny antony maro samihafa.
Rehefa misoratra anarana amin'ny drafitra Enterprise, Elite na Celebrity ianao dia mandray mpanjifa 10-15 (Enterprise), mpanjifa 20-30 (Elite), na mpamandrika 40-60 (Celebrity) isan'andro, 100% ho azy. Ny mpampiasa sasany dia hisoratra anarana, mamela anao 70-80% eo ho eo ny mpanjifa isaky ny mandeha.
Tsy toy ny Free Plans, ny drafitra karama dia 100% mandeha ho azy, midika izany raha vao misoratra anarana amin'izany ianao dia tsy mila miverina any amin'ny YTpals intsony. Homena anao mpamandrika vaovao isan'andro avy hatrany izahay, ka mitombo haingana ny volanao, tsy misy ezaka!
Ny vidiny takianay amin'ireto drafitra ireto dia ambany noho ny ankamaroan'ny tranokala handoavana ny mpanjifa "sandoka" indray mandeha fa tsy ny fisehoana voajanahary, ny fitomboana isan'andro toa ny entinay
Ireo drafitra karama ireo dia miantoka ny fitomboanao ho voajanahary ary mandany ampahany amin'ny vidiny!
Nampihetsika ny drafitra Enterprise, Elite na Celebrity aho, saingy tsy mihetsika ny famandrihako.
Raha nividy soa aman-tsara ny drafitra Enterprise, Elite na Celebrity ianao, saingy tsy mavitrika ny famandrihana anao, azafady Mifandraisa aminay ary andefaso pikantsary iray momba ny pejy momba ny fifanakalozana na ny fahazoana anay ary ny URL fantsonao, izay hanome anay ny vaovao rehetra ilainay hanampiana anao.
Navoitrako ny drafitra Enterprise, Elite na Celebrity latsaky ny 24 ora lasa izay ary mbola tsy nahazo mpamandrika.
Rehefa mividy ny drafitra Enterprise, Elite na Celebrity ianao dia miditra ao anaty tamba-jotra ao anatin'ny ora vitsivitsy ny fantsonao ary avy eo mijanona ao anatiny mandritra ny 24 ora, izay ny fiandohan'ny andro voalohany. Mandritra io 24 ora io dia hahazo ny quota-n'ny mpamandrika amin'ny andronao ianao ary avy eo mamerina ny tsingerina indray ny ampitso. Ataovy ao an-tsaina fa ireo mpamandrika dia tsy tonga eo noho eo, fa aterina ao anatin'ny fe-potoana 24 ora isan'andro. Raha tsy mahazo mpamandrika ao anatin'ny 48 ora ianao dia andefaso hafatra izahay dia hijery izany izahay.
Ireo mpamandrika dia tsy manoratra. Inona no mitranga?
Mba hamaliana io fanontaniana io dia misy lafin-javatra vitsivitsy hodinihina. Ity no tokony ho fantatrao:
Rehefa mampiasa ny serivisy YTpals ianao dia asehon'ny antontan'isa fa manodidina ny 70-80% amin'ireo mpamandrika azonao isan'andro no mijanona ao amin'ny kaontinao. Amin'izany voalaza izany dia matetika izahay manatitra fanampin-javatra fanampiny hanampiana amin'ny fanonerana ny fatiantoka.
Ny antony tsy ijanonanan'izy rehetra ao amin'ny kaontinao dia satria misy olona tsy manaraka ny lalàna ary tsy manoratra, fa voarara sy / na voasazy noho izany ary ny YouTube dia mamafa ihany koa ny mpamandrika sasany.
Ankoatr'izay, ny algorithma farany an'ny YouTube dia mamafa matetika ny ampahan'ny mpamandrika omena. Mba hampihenana ny famafana ny YouTube dia tokony hifantoka amin'ny famoahana horonan-tsary vaovao ianao ary hampitombo ny fomba fijery sy ny tianao amin'ny horonan-tsarinao. Raha manana mpamandrika bebe kokoa noho ny fahitana ianao dia tsy mitombina izany raha hitranga izany, ka hirona hamafana mpikirakira maro kokoa ny YouTube.
Ny ankamaroan'ny mpanjifanay dia faly amin'ny serivisy satria manampy tokoa ny fantson'izy ireo hitombo amin'ny vidiny mirary.
Te-hanafoana ny serivisiko aho ary hahazo famerenam-bola.
Raha mividy drafitra fisoratana anarana ianao ary tsy faly amin'ny serivisy, azafady mifandraisa aminay ao anatin'ny 3 andro aorian'ny daty fandoavam-bola anao ary haverinay tanteraka sy hofoanana ny famandrihana anao. Raha mifandray aminay mihoatra ny 3 andro aorian'ny nanaovana ny fandoavam-bola ianao ary mangataka famerenam-bola, ny ekipanay dia handinika ny kaontinao ary raha misy lesoka izany eo amin'ny fiafaranay dia haverinay tanteraka ny volanao, na haverinay ny sandan'ny andro tsy ampiasaina amin'ny volana, na tsy hamerina na inona na inona raha 7+ andro aorian'ny nanoratanao anarana tamin'ny serivisinay.
Ahoana no hanafoanana ny famandrihana nandoa vola ahy?
Rehefa mividy fisoratana anarana Enterprise, Elite na Celebrity ianao dia halefa ho azy amin'ny andro iray isam-bolana. Raha tsy mila ny famandrihana YTpals intsony ianao amin'ny fotoana sasany, mandefasa hafatra fotsiny aminay amin'ny alàlan'ny pejy Mifandraisa aminay ary hametraka ny kaontinao ho tapitra amin'ny faran'ny fisoratana anarana isam-bolana ianao.
Raha nisoratra anarana tamin'ny 23 volana ianao, ohatra, fa manorata aminay momba ny fanafoanana ny kaontinao amin'ny 10 amin'ny volana manaraka, dia hapetrakay ny kaontinao hanafoanana 13 andro aty aoriana, amin'ny faran'ny fisoratana anarana amin'ny volana ankehitriny. Raha tianao ny fanafoanana eo noho eo, ampahafantaro anay fotsiny izahay ary afaka manao izany ho anao koa izahay.
Tsy adidinao ny mijanona misoratra anarana amin'ny fotoana rehetra, fa mila manoratra aminay ianao rehefa vonona ny hanafoana. Homaninay izany ary handefa hafatra fanamafisana aminao.
Azoko atao ve ny mampiasa ny serivisy voaloa mandritra ny 1 volana monja?
Azonao atao ny mampihetsika drafi-karama amin'ny alàlan'ny safidin'ny fandoavam-bola eto an-toerana sy hanafoana ny drafitrao amin'ny fotoana rehetra. Alefaso imailaka fotsiny izahay rehefa avy nisoratra anarana tamina drafitra iray naloa ianao ary hofarananay ny kaontinao aorian'ny fe-potoana iray volana ary tsy hanomezana vola indray ianao.
Tsy misy carte de crédit? Tsisy olana. Aloavy amin'ny karatra fanomezana!
Azonao atao izao ny mividy ny drafitra Enterprise, Elite na Celebrity anao amin'ny alàlan'ny karatra fanomezana!
Tombontsoa amin'ny fampiasana ny Openbucks "Mandoa amin'ny karatra fanomezana"
mety: Toerana +150,000 hametrahana ny volanao amin'ny karatra fanomezana.
TSISY FARANY: Tsy misy fandefasana entana, fampiasana na saram-panafarana! Volanao tsotra izao - amin'ny karatra fanomezana.
MAMPIDI-DOZA: Tsy mila misoratra anarana na manome fampahalalana momba ny tena / banky ianao handoavana karatra fanomezana.
EASY: Miantsena sy mandoa amin'ny karatra fanomezana amin'ny birao, tablette na finday.
Ahoana ny fampiasana izany?
Mividiana karatra fanomezana amin'ny CVS / Pharmacy, Dollar General na oBucks. Azonao atao ny manamarina ny toerana misy ny mpivarotra akaiky anao indrindra amin'ny alàlan'ny fampidirana ny kaody zip amin'ny iray amin'ireo tranonkalany.
Midira ao amin'ny kaontinao YTpals ary safidio na ny "Enterprise", ny "Elite" na ny "Celebrity" dia mikasa hanavao miaraka.
Safidio ny "Pay with Cards Cards" amin'ny fizahana ary ampidiro ny antsipiriany momba ny karatrao rehefa avy voatsindrina.
Dia izay! Ankehitriny ianao dia afaka mankafy ny fanavaozana anao!